600A Cable Accessories Vagadziri & Vatengesi | China 600A Cable Chishongedzo Fekitori
600A 15kV Yakasarudzika Kufa Kwekushusha
Anhuang nyanzvi Integral Deadbreak Bushing, isu kupa yepamusoro Integral Deadbreak Bushing. General: 600A Yakasarudzika Dead break kana Vacuum switch Bushing yakagadzirirwa Cable Branch Cabinet ine Sf6 Loadbreak switch. Zvinopatsanurwa zvinongedzo, senge 600A T uye T-11 vakafa mabhureki ekubatanidza anogona kushandiswa neaya bushing. Iyi bushings inogadzirwa neEpoxy Resin. Nesiketi ita iyo Dead break Rotatable Feed-thru Bushing inogona kushandiswa zvirinani. Kit Zviri Mukati: ● lntegral Deadbreak Bushing ● I ...
600A Deadbreak Tee Tap Chinobatanidza
Anhuang anozvisarudzira muRedbreak Tee Tap Chinobatanidza, isu tinopa mhando yepamusoro Deadbreak Tee Tap Connector. Structure: Inobatanidza sikuruwa: tini-yakarongedzwa mhangura yakapetwa misoro miviri, uye casing kuverengera kubatana. Crimp terminal: Zvichienderana neiyo tambo yezvinhu, sarudza iyo yemhangura crimp terminal kana mhangura-aluminium crimp terminal. Iyo yekunze semiconducting dura: yakagadzirirwa EPDM conductive rabha uye tambo inodzivirira kuti ibudirire kuenderera nekudzivirira, uye kuve nechokwadi chekuti yekunze hafu Mufambiro ...
600A Yakananga kufa kwekufa kweJunction
Anhuang nyanzvi mune Yakaumbwa busbar, isu tinopa mhando yepamusoro Yakanangana nekufa kwekufa kweJunction. General: 200A / 600A Yakanangana nekufa kwekufa kweJunction inopa maviri, matatu kana mana 200A mutoro kuzorora uye 600A yakafa break, 15kV yakavhenganiswa nzvimbo kune rimwe divi iro remukati rakaburitswa pamwechete uye rinosangana zvese zvinodikanwa zve ANSI / IEEE 386-Separable Insulated Connector Systems. Kana ichinge yasangana neyeyakaenzana chigadzirwa, iyo junction inopa yakazara yakadzivirirwa, yakazara insured, inoparadzaniswa kubatana kwemutoro kupaza kana kufa ...
15kV24kV 600A Deadbreak Busbar miganho
Anhuang nyanzvi muvakafa zororo mharadzano, isu zvinopa yepamusoro Vakafa yokuzorora mharadzano. General: 600A Vakafa mabhureki emabhasoni jangoni mune tambo yebazi mutsara anotamba basa rebhazi. Unhu hwayo hwakanyatso dzivirirwa, hwakasimbiswa zvizere. 600A busbar inogona T-mhando tambo chinobatanidza, T-II tambo chinobatanidza, 600A yekuwedzera chubhu uye 600A yakadzivirirwa chivharo pamwe nekuumbwa kwetambo yakawanda-bazi mutsara. 600A Deadbreak busbar junctions yakagadzirwa nemhando yepamusoro yekudzivirira zvinhu. Kit Zviri Mukati: ● Busbar muviri ● Insta ...
15kV 600A Yakasungwa Inodzivirira Cap
Anhuang nyanzvi Inodzivirirwa Inodzivirira Cap, isu tinopa yepamusoro Insulated Inodzivirira Cap. General sumo: 15kV / 24kV 600A Yakasungirirwa Inodzivirira Cap chishongedzo chishandiso chakagadzirirwa kumagetsi ally kuvhara uye muchina chisimbiso mutoro kuputsa bushing nzvimbo. Kana uchinge wasangana nemutoro wekutsemura chigadzirwa uye iyo yekudonha waya yakasungirirwa pasi, iyo Insulated Inodzivirira Kapu inopa yakazara yakadzivirirwa, inonyudza inodzivirira chifukidzo chemasimba akasimba. Iyo Yakasungirirwa Inodzivirira Cap inogona kushandiswa ...
15kV24kV 600A Dead break T Kubatanidza Plug
Anhuang nyanzvi Deadbreak Tee chivhariso, isu kupa yepamusoro Deadbreak Tee pug Connector. General: 600A Rakafa zororo T Connector plugs anoshandiswa kubatanidza maviri kana anopfuura 600A akafa mabreki terminator. Dead break Connector plugs anowanzo shandiswa akapatsanurwa splice, kana ne bushing extender, kuwedzera daro kubva kumidziyo pamberi ndiro kune iyo 600A terminator, kurerutsa tambo kudzidziswa. Mutoro unotyoka Magokora akaumbwa achishandisa mhando yepamusoro sarufa-yakaporeswa ichidzivirira uye semi-kuitisa ...
600A Loadbreak Kuderedza Tap Tap Plug
Anhuang nyanzvi Loadbreak Kuderedza Tap Plug, isu kupa yepamusoro Loadbreak Kuderedza Tap Plug. General: 600A / 200A Yakasarudzika Dead break Breaking inoshandiswa kushandura yakajairwa 600A yakafa break interface kune yakajairwa 200A mutoro kuputsa interface. Inoshandiswa ne200A yakadzivirirwa cap yekudzivirira, MOV Elbow Arrester, Grounding Elbow kana Load break Break Elbow Connector, Iyo yakakosha kufa break break bushing inopa yakazara yakadzivirirwa. Ichave T-Ⅱconnector kana ikabatana neT connector. Kit Zviri Mukati: Loadbreak Re ...
600A T Kufa Kwekubatanidza
Anhuang nyanzvi Deadbreak Connector, isu tinopa yepamusoro Dead break Connector. Kuteedzerwa kwematanho. ANSI / IEEE Std386-2006600V ● Yakafumurwa semiconductor majaketi emhando yepamusoro - emagetsi tambo tambo uye akapatsanurwa akasungirirwa akasungirirwa; ● Yakawedzerwa tambo dzemagetsi dzakasungirirwa uye zvishongedzo zvadzo zvine ma voltages akakwira pamusoro pe1 kV (Um = 1.2 kV) kusvika 30 kV (Um - 35 kV); ● Nzira dzekuyedza dzezvishandiso zvemagetsi ca ...